Iska Ilow Lionel Messi & Cristiano Ronaldo Iyo Laacib hor leh oo daaqada ka saaray labadoodaba kadib markii…. – Puntlandtimes
Iska Ilow Lionel Messi & Cristiano Ronaldo Iyo Laacib hor leh oo daaqada ka saaray labadoodaba kadib markii….
March 20, 2019 Puntland PL
NAIROBI(P-TIMES)- Waqti walba waayihiisa leh, xilli walbaana ninkiisa leh. Mushaharka ugu badan ee ciyaaryahannada la siiyo, waxa horjoogeyaal ugu ahaa caalamka Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo oo kaliya dhinaca lacagta aan ku koobnayn balse abaal-marin kasta oo shaqsi ah oo la bixiyo kaligood kala cidhiidhsan jiray.
Hadda waqtigoodii waa dhacay sida ay caddaynayaan xogaha suuqa iyo lacag bixinta mushaharooyinka ciyaaryahannada caalamka.
Toddobaadkan, waxa dunida qabsaday ciyaartoy u dhashay waddanka Marayanka oo lagu magacaabo Mike Trout oo khadka dhexe uga ciyaara kooxda Los Angeles Angeles ee tartanka MLB ee kubadda Baseball.
Waxa uu qalinka ku duugay heshiis 12 sannadood ah oo uu ku qaadanayo lacag ka badan $430 milyan oo dollar.
Dabcan waa 12 sannadood laakiin ma jiro ciyaartoy kusoo dhow amaba illaa hadda mushahar u qaatay lacag xaddigaas le’eg dhamaan ciyaaraha kala duwan ee caalamka.
Haddii aynu sii kala-jajabino lacagtan, sannadkii waxa uu qaadanayaa mushahar dhan $35,833,333. Haddii aynu ka dhigno bil ahaanna, waxa uu bil kasta qaadanayaa lacag dhan $2,986,111. Haddii aynu toddobaadle ka dhigno, waxay noqonaysaa inuu usbuuc kasta xoogsado lacag dhan $746,527.
Haddii aynu kusii talax-tagno, maalin kasta 12-ka sannadood ee heshiiskiisa waxa uu qaadanayaa lacag dhan $106,656. Haddaba maxay ka noqonaysaa saacaddii, daqiiqaddii iyo ilbidhiqsigii?
Trout saacad kasta waxa uu mushahar u qaadanayaa $4,443, daqiiqaddiina $74 halka ilbidhiqsi kastana uu helayo $1.23.
Lacagtan aynu kor kusoo sheegnay ee uu laacibkani qaadanayo, dhamaan waxay ku kooban tahay mushahar, kumana jiraan gunnooyinka dheeraadka ah ee uu helayo sida haddii ay kooxdu ku guuleysato koobab oo ciyaaryahannada loo qaybiyo abaal-gud, heshiisyada uu shirkadaha la galo iyo wax kasta oo kale sida xuquuqda sawirka.
Sannadkii 2018, Feedhyahanka Floyd Mayweather ayaa caalamka qabsaday markii uu hal habeen oo uu feedhtamay ka helay $275 milyan oo dollar oo ay u dheerayd $10 milyan oo kale oo kasoo galay xayaysiistii habeenkaas.
Lama qiyaasi karayo haddii uu Mayweather feedhtami lahaa bil kasta amaba sannadkii dhawr jeer xaddiga soo geli lahaa halkii dagaalba.
Marka laga yimaaddo Mike Trout, waxa kaalinta labaad ee liiska ciyaaryahannada mushaharka ugu badan ka qaata caalamka ku jira LeBron James oo heshiiskii uu xagaagii ugu wareegay naadiga kubadda Kolayga ee Los Angeles Lakers ee horyaalka NBA uu sannadkii ku qaadanayo mushahar dhan $33.5 milyan.
Lionel Messi oo kaalinta saddexaad soo gelaya marka laga eego mushaharka rasmiga ah ee aanay gunnooyinka dheeraadka ah ku jirin ayaa waxa uu sannadkii Barcelona mushahar ahaan uga qaataa $33 milyan, taas oo ka dhigan in toddobaadkii uu u xaadiro lacag dhan $645,000.
Cristiano Ronaldo ayaa kaalinta afraad ee liiska soo gelaya, waxaanu sannadkii Juventus ka qaadanayaa lacag dhan $31 milyan.